Keshu Archives - Kavyalaya - काव्यालय
फौजी बन्ने रहर
by Keshu कार्तिक २, २०७६
written by Keshu
जिन्दगीमा धेरै कुराहरु हुन्छन् जुन सम्झिराख्नुपर्छ तर मान्छे सम्झिन तयार हुँदैनन्। अनि जिन्दगीमा धेरै कुराहरु हुन्छ्न् जुन बिर्सिदिनुपर्छ तर मान्छे बिर्सिन तयार हुँदैनन्।
यो त्यही धमिलो स्मृतिमा संग्रहित एउटा स्मृति हो जुन मैले बिर्सनुपर्थ्यो। जुन बिर्सिदाँ मलाई जिन्दगीको कारोबारमा नाफैनाफा हुने थियो। तर दुर्भाग्य, मैले कहिल्यै बिर्सन सकिनँ। सक्दिनँ पनि। बरु घाटैघाटा खाएर बाँच्न मलाई मन्जुर छ।
कहिलेकाही सोचिबस्छु। स्मृतिको धमिलो आकाशमा उडिहिड्छन् केही थान प्रश्नहरु। जुन प्रश्न वचपनको बेला स्कुलमा गुरुमाले दुइटा गालामा चिमोट्दै सोध्नुहुन्थ्यो –
‘पछि ठु…..लो भएर के बन्छौ ?’
जुन प्रश्न सानोमा आमाले कपालमा तेल लगाउदै गर्दा सोध्नुहुन्थ्यो –
‘मेरो छोरा प……छि गएर के बन्ने ?’
र त्यही प्रश्नको पछिपछि उडिहिड्छन् केही थान अपरिपक्व उत्तरहरु। जुन उत्तर मैले माष्तिष्कबाट नभैइ मनबाट दिने गर्थेँ। जस्तो – ‘ डाक्टल, इन्जिनियल, पाइलट बन्ने सल।’ अथवा – ‘ माँ, मो ट हिलो बन्ने हो, राजेसमाल जस्टो।’
अचेल म आफैंसङ्ग आत्मसमिक्षा गरिरहेको हुन्छु। के म मैले बन्छु भनेको जस्तो बन्न सकेँ ? डाक्टल, इन्जिनियल, पाइलट वा राजेसमाल बन्ने सकेँ ? म निष्कर्ष भेट्दिनँ। बरु चित्त बुझाउँन खोज्छु – ती रहरहरु/सपनाहरु भनेको त ठेगाना बिराएर आएका चिठ्ठी जस्ता थिए। पछि आफ्नै ठेगानातिर हिँडे। मकहाँ बसेनन्। र ठीकै गरे।
जिन्दगी भनेको विधालय जस्तै रहेछ। जहाँ विभिन्न बिषयहरु पढ्नुपर्छ। ती विषयहरुमा पनि विभिन्न च्याप्टर हुँदा रहेछन्। कुनैकुनै च्याप्टर रहरहरुका हुँदारहेछन्। सपनाहरुका हुँदारहेछन्। कुनैकुनै च्याप्टर बाध्याताहरुका हुँदारहेछन्। परिस्थितिहरुका हुँदारहेछन्।
तपाईहरु अहिले जुन पढ्दै हुनुहुन्छ – यो त्यही रहर र बाध्यताहरुको मिश्रीत च्याप्टर हो जुन च्याप्टरको शिक्षक मै थिएँ अनि विधार्थीपनि मै। के मैले यो परिक्षा सजिलै पास गर्न सकेँ ? या फेल भएँ ? पास भएको भए कत्ति अंक ल्याएर पास भएँ ? अथवा कति नम्बर अपुग भएर फेल भएँ ? नतिजाको लागि तपाईले अन्तिमसम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त यो कुनै चर्चित वा पढ्नै पर्ने मान्छेको भोगाई भने होइन, तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्न भने पनि शतप्रतिशत छुट छ।
एसएलसीको नतिजा प्रथम श्रेणीमा आयो। तर त्यो प्रथम श्रेणीको नतिजा केवल प्रमाणपत्रको लागि थियो। मेरो विद्यालयको लागि त म विशिष्ट श्रेणीमा पास भएको थिएँ। परिवारको लागि जिल्ला टप जस्तै थिएँ। अनि आफ्नो लागि बोर्ड टप जत्तिकै। त्यतिबेला एकहुल खुशीहरु आएर आँगनभरी रोधी खेलेर गएका थिए। हर्षहरुले बिजयी र्याली निकालेर हिडेका थिएँ । धेरैभन्दा धेरै इष्टमित्रहरु मेरो घरमा आएका थिए। तर जो जो आए, बधाई भन्दा बढी यो विषय पढ्नु, यहाँ पढ्नु, यसरी पढ्नु भन्ने सल्लाह दिएर गएका थिए। यसले पनि मलाई सदरमुकाम जान्छु, बिज्ञान विषय पढ्छु, डाक्टर, इन्जिनियर बन्छु नभए मास्टर त पक्का भन्ने सोच्न ठूलो भुमिका खेलेको थियो। मैले त्यत्तिबेला त्यही सोचें जुन मैले सोच्नुपर्थ्यो।सदरमुकाम तानसेन आएपछि विज्ञान विषय लिएर पढेँ। लाग्थ्यो, अब राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। सके डाक्टर बन्नुपर्छ, दुखेको देशको उपचार गर्नुपर्छ। देशभित्र दुखेर बाँचेका मान्छेहरुको उपचार गर्नुपर्छ। नसके इन्जिनियर बन्नुपर्छ। देशलाई अगाडि बढाउने नक्सा मैले नै बनाउनुपर्छ। नदेखिने मान्छेहरु देखिने खालको देश निर्माणमा मैले भुमिका खेल्नुपर्छ। अझैपनि नसके मास्टर। मैले आफुसङ्ग भएका शिक्षा आफुजस्तै अरुमा रूपान्तर गर्नुपर्छ। केही दुखका कारणहरु पत्ता लगाउनुपर्छ। नयाँ नयाँ खुशी हुने तरिकाहरुको अविष्कार गर्नुपर्छ। जे होस् – यत्ति सोचेको थिएँ, म यो देशको नागरिक हुँ। मैले देशको लागि विज्ञान पढ्नुपर्छ। मैले दुईवर्ष विज्ञान पढेँ।
कक्षा १२ को परिक्षालाई पन्छाईसकेपछि म गाउँ गएँ। म मनैदेखी हलुको हुन चाहन्थेँ। मैले सोचेको जस्तो हलुको म गाउँमा मात्रै हुन सक्थेँ। त्यसैले आफ्नो एकथान जिन्दगीलाई मैले गाउँ पुर्याएँ।
जब म गाउँमा थिएँ, मेरो उमेरको सङ्ख्याको पछिल्लो अंकमा एक अंक जोडियो। म १७ बाट सजिलै १८ वर्ष पुगें। १८ वर्ष पुग्नु भनेको कुनैपनि किसिमको जागिरको उम्मेदवारी दिनकालागि योग्य हुनु हो। म कुनै न कुनै जागिरको लागि उम्मेदवार बन्न योग्य भएँ। खासमा म मेरो समाजको लागि फौजी बन्न योग्य उम्मेदवार बन्न योग्य भएँ। मेरो समाजले मलाई एउटा भावी फौजीको रुपमा हेरिसकेको थियो।
एकजना साथी र म कक्षा १२ को परीक्षा दिएर नतिजा कुर्दै थियौँ। हामी एकाअर्कालाई सम्धी सम्बोधनले स्वीकार्थ्यौँ। एकदिन उहाँले बुटवल भर्ती खुलेको जानकारी गराउनुभयो। घरमा आमाबुबाको म जेठो छोरा थिएँ। लाहुरेमा भर्ती होस् भन्ने चाहना थियो। मेरो परिवार मलाई बूढो घरको नयाँ खम्बा बनेको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। गाउँलेहरुले समेत मेरो ज्यान देखेर निर्विरोध लाहुरे घोषणा गरिसकेका थिए। तर मेरो फौजी बन्ने रहर भने पटक्कै थिएन।
खासमा आफ्नै जिन्दगी पनि आफ्नै लागि होइन रहेछ। मैले बुझिसकेको थिएँ, म भर्तीमा देखिन जानुपर्छ। आफ्नो लागि होइन, परिवारको लागि। समाजको लागि। आफ्नो सुन्दर भविष्यको लागि।असारको समय, पानी परिरहने। म र साथी पहिलोपटक भर्ती देखिन गयौँ। दौड हुने दिन राती १२ बजे नै लाइनमा गएर बस्यौँ। हामीजस्ता आफ्नै रहरहरुलाई मारेर परिवारको लागि फौजी बन्ने सपना पालेका धेरै युवाहरु थिए त्यहाँ। त्यसो त आफ्नै रहरले पनि फौजी हुन्छु भन्ने युवाहरुको पनि अझै बढी सङ्ख्या थियो। लाइनमा बस्दा केटाहरू अनेक अनेक कुरा गर्थे। कुनै रहरका। कुनै संघर्षका। कुनै सफलता। कुनै जितका। कुनै हर्षका। कुनै खुशीमा। कुनै अनुशासनका। फेरि लहरैसङ्ग हुन्थे त्यस्तै कुरा। कुनै बाध्यताका। कुनै परिस्थितिका। कुनै हारका। कुनै रोदनका। कुनै असफलताका। कुनै अश्लील। अझै धेरैभन्दा धेरै त त्यहा अश्लील गफ बढी भयो। हुनपनि त्यो एउटा जोस् थियो। उमेर थियो। युवाहरूको त्यो जमात देखेर, त्यो उत्साह देखेर मेरो वाध्यता विस्तारै रहरमा परिणत हुँदै गयो। पहिलो पटक पाँच चक्कर लगाउनुपर्ने दौडमा मैले तीन चक्कार दौडिएँ। तर त्यो मेरो लागि धेरै थियो। साथीले यस्तै दुई चक्कर लगाएको थियो। सिधाभन्नुपर्दा गल्ला सा’पको भनाई जस्तै म ब्रोईलर कुखुरा सावित भएँ।
पहिलोपटक करले भर्ती हुन गएको थिएँ। त्यो एउटा बाध्यता थियो। थाहा थिएन, बाध्यता भित्रपनि रहर लुकेर बसेको हुन्छ भन्ने। अर्कोपटक भर्ती देखिने मेरो रहर बन्यो। रहर मात्रै होइन ठूलो रहर। दौड पूरा भएपछि भित्र क्याम्पमा छिर्दा मुहारमा आउने एउटा उज्यालोले मलाई तानेको थियो। दौड पूरा भएपछि गल्लाको हातले आफ्नो काँधमा धाप मार्दा देखिने एउटा जिम्मेवारीले मलाई तानेको थियो। फौजी भएपछि पहिलोपटक सेतो टीका लगाएर घर छाड्दा मनभरी खेल्ने परिवारको रंङ्गिन सपनाहरूले मलाई तानेको थियो। खासमा नढाँटी भन्नुपर्दा दौड सुरुहुनुभन्दा पहिले लाइनमा बस्दा हुने अश्लील अनि उत्ताउला शब्दहरुले मलाई तानेको थियो। गल्ला सा’पले सबै केटाहरूको सामुन्ने बोल्ने उच्छृङ्खल वाक्यहरुले काउकुती लगाएको थियो। त्यसैले मलाई तानेको थियो।
दोस्रोपटक भर्ती पोखरा खुलेको थियो। म साविकको भन्दा मजबुत भएर गएको थिएँ। मैले दौडमा धेरै ध्यान दिएको थिएँ। दिमाग टेस्ट सबैले सजिलै कटाउछस् भन्थे। यसले मलाई सजिलैसँग कटाउछु भन्नेमा आत्मविश्वास थियो। हुनपनि म सामान्य विधार्थी थिएँ तर सामान्य ज्ञानमा मेरो औधी रुचि थियो। गणित विज्ञान र अंग्रेजीका प्रश्नहरु म सजिलै मिलाउथेँ। दौड हुने दिन पोखरा प्रहरी क्याम्पमा बिहानै देखि लाइन बस्यौँ। पालो आयो। दौडियौँ। म पनि दौडेँ। तर पहिलोपटकको दौडभन्दा त केही प्रगती भयो। तर दौडमा छनौट हुन सकिनँ। मैले यो पटक चार चक्कर लगाएँ। आफुलाई चक्कर नै आउला जस्तो भएपनि सम्हाल्न सकेँ। अझै बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने पाठ सिकेर म घर फर्केँ। घरमा सबैले आश मारिसकेका थिए। भन्थे, ‘दुई दुई चोटिमा समेत दगुर्न सकिनस्। अब तँ कहिल्यै भर्ती हुँदैनस्। अल्छी।’
तेस्रोपटक बुटवल भर्ती खुल्ने भयो। प्राय हाम्रो समाजमा तेस्रोपटकलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ। मैलेपनि तेस्रोपटकलाई त्यस्तै विशेष महत्वका साथ लिएँ। मैले धेरै मिहेनत गरेको थिएँ। धेरै जुत्ता हरु च्यातिसकेको थिएँ। म मनमनै सोचिरहन्थेँ र ढुक्क हुन्थेँ, योपटक भर्ती निश्चित छ। किनभने यो मेरो तेस्रोपटक थियो। फेरि मैले अझै धेरै मिहिनेत पनि गरेको थिएँ। एउटा गणितीय समीकरण समेत थियो मसङ्ग, पहिलोपटक तीन राउण्ड। दोस्रोपटक चार र अबको तेस्रोपटकमा पक्का पाँच।
तेस्रोपटक म दौडिएँ। हाम्रो ग्रुपमा मजस्तै १०० जनाको समूह थियो। हेर्दा सबैजना म्याराथन धावक जस्तै देखिन्थे। तर मैले तेस्रो हुँदै दौड पूरा गरेँ। मैले फौजी हुनको लागि पहिलो चरण पार गरेँ। यो मेरो मात्रै जित थिएन, मेरो परिवारको जित थियो। मेरो गाउँलेहरुको समेत जित थियो। यो सुचना घर पुग्दासम्म बधाईको ओइरो आइसकेको थियो। वास्तवमा म फौजी भैइसकेको थिएँ। घोषणा हुन मात्रै बाँकी थियो।
दौड पूरा भयो। लिखित टेस्ट पनि सजिलै पास गरेँ। अब बाँकी थियो शरिरिक परिक्षण अर्थात मेडिकल टेस्ट। त्यसो त ममा कुनै त्यस्तो ठूलो रोग थिएन। म मेडिकल फिट छु भन्नेमा म ढुक्क थिएँ। घरमा थरीथरीका मान्छेहरू आइसकेका थिए। आउने मध्य एकथरी भन्थे, ‘ अब बाँकी काम सबै पैसाको हो। पैसा दिनैपर्छ। बेलैमा सोच्नुस्। मौका खेर जाला ।’
अर्काथरी भन्थे, ‘ पैसा दिनुपर्दैन। यो सबै दलालहरुको काम हो। फौजी त आफ्नै ल्याकतले हुने कुरा हो। नफस्नुस् है नफस्नुस्।’
बुवाआमा बडो दोधारमा हुनुहुन्थ्यो। गर्ने के ? अलमल्लमा थियौँ। हामी यो मौका गुमाउन चाहन्नथ्यौँ। फेरि म आफै भर्ती हुन सक्षम थिएँ। उमेर १९ वर्षको थिएँ, मतलब अझै उमेर थियो। हामीले पैसा नदिएरै फौजी हुनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। म आफ्नो मेडिकल पुर्व परिक्षण गरेर गोरखपुर गएँ।
गोरखपुरमा हामी ज्ञानघरमा बस्यौँ। ज्ञान घर भएपनि घ्याङघर भनेर चिन्थ्यौँ सबैले। हाम्रो पालो ३ दिनपछि आयो। मेडिकल टेस्ट हुनुभन्दा अघिल्लो रात हामीले सादा खाना खायौँ। ढुकढुकी बढ्छ भनेर साथीहरुले चिल्लो खाना खाएनन्। मासु खाएनन्। मैले साथीहरूको सिको गरेँ। साथीहरूले भनेको सुनेको थिएँ, ‘ ढुकढुकी नाप्ने बेला गर्लेफ्रेन्डलाई सम्झिनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने ध्यान अन्तै जान्छ र डाक्टरको अगाडि डर आउँदैन। ढुकढुकी कम हुन्छ।’
हाम्रो सयजनाको ग्रुप थियो। मेडिकल टेस्ट भित्र पर्ने सबै सबै चरण पार गर्दै गयौँ। म पनि सबै सबैमा पास हुँदै गएँ। अब बाँकी रह्यो ढुकढुकी जाँच। मलाई सबैभन्दा डर त्यसैमा थियो। सुनेको थिएँं, एकपटक ढुकढुकीमा फालिनेहरु कहिल्यै फिट हुदैनन् फौजीको लागि। म यही भनाई सम्झेर झनै डराएको थिएँ। आखिर जिन्दगी भनेको संयोग नै त हो रहेछ। म जुन कुराले डराएको थिएँ त्यसैमा म फेल भएँ। मेडिकलको भाषामा भन्नुपर्दा म ‘कर्डिक मरमर्’भन्ने रोग या टपिकमा अनफिट भएँ। हामी ६४ जनाको युवा जमातलाई रि-मेडिकलको लागि बोलाईयो। हामी भाँचिएको मन लिएर फर्कियौँ।
दोस्रोपटक १५ दिनपछि गोरखपुर गयौँ। हामीमा आश भन्दा बढी निराशाले आफ्नो सम्राज्य फैलाईसकेको थियो। हामी ज्ञानघरमै बस्यौँ। पालो कुर्दा कुर्दा करिव ४ दिनपछि हाम्रो मेडिकल भयो।
” हामी सबै युवाहरुलाई बोलाउछन् एक गल्लाले। सबैजना उत्साहित भएर हामी ग्राउन्डमा पुग्छौं। किनकि आज रिजल्ट डे हो। यदि ६४ जनाको ग्रुपमा एकजना मात्रै मेडिकल पास भएपनि त्यो एकजना आफू नै हो भन्ने आशा ६४ जना युवाहरुमै छ। यो कस्तो आशा मान्छेहरुको ? हामी सबैजनालाई अगाडि राखेर गल्लाले रिजल्ट सुनाउछन्, भन्छन्’ तिमिहरु ६४ जना मध्य यो नम्बरको एकजना फिट भएका छन्। अरुले पछि ट्राई गर्ने। अब भरतपुर टुर आउँछ। चेष्ट नम्बर …… पास।’
कति सजिलै नतिजा सुनाउँछ गल्ला सा’पले। हामी मध्य एकजनाको नाम आउँछ, बाँकी ६३ जनाको नाम आउदैन। यो कस्तो अन्याय ? हाम्रो मुहारमा बादल डुलिरहन्छ। हाम्रो मुहार अध्यँरो हुन्छ।’
सिर्र सिठी फुक्यो कसैले। म ब्युँझिएँ। माथि जति पढ्नुभयो त्यो सपना थियो। अब हामी सबैजना तयार भयौँ। साँच्चिकै त्यो दिन रिजल्ट डे थियो। हामीसँग उत्साह थियो। हामी लाइनमा बस्यौँ। अघि सपनामा जस्तै गल्लाले रिजल्ट सुनायो। जिन्दगीमा पहिलोपटक मैले निदाउँदा देखेको सपना साँचो भयो।यो कस्तो संयोग ? हामी ६४ जनामध्य एकजना पास भयो बाँकी सबै फेल भयौँ। भन्नुपर्दा फालियौँ। खासमा ज्ञानघरबाट थुप्रै ज्ञान लिएर हामी घर फर्कियौँ। एउटा अध्यँरो मुहार लिएर हामी घर फर्कियौँ।
त्यसपछि देश भुकम्पको चपेटामा पर्यो। लगत्तै नाकाबन्दीको मारमा पर्यो। खुल्न भनेको भर्ती र्यालीहरु खुल्न सकेनन् । म जस्तै धेरै युवाहरुको उमेर दिनानुदिन घट्दै गैइरहेको थियो। भारत सरकारको जागिरे हुन नपाएपछि देशविरुद्द अघोषित नाकाबन्दी गर्ने छिमेकी राष्ट्र भारतलाई म जस्ता कयौँ युवाहरुले सराप्नु सरापे। तर भर्ती खुलेन। करिव एकवर्ष भर्ती खुलेन। मेरो भर्तीहुने एकतिहाई उमेर सकिसकेको थियो। धेरै युवाहरुको लाहुरे हुने सपना नाकाबन्दी मै बन्दी भएको थियो।
पछि देश बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यो। मैले पढाईलाई धेरै दुर छोडेर आएको थिएँ। अब मलाई जसरी हुन्छ फौजी हुनु थियो। मैले त्यो एकवर्षमा अझै आफुलाई निखारेको थिएँ। सपनाहरुको वजन बढाएर आफ्नो ज्यानको वजन घटाएको थिएँ। गोल्डजस्तै सपनाहरु टाल्न सकियोस् भनेर धेरै गोल्डस्टार जुत्ताहरु फटाएको थिएँ। सपनाहरु सजिलै उठाउन सकियोस् भनेर ढाकरमा बालुवा राखेर दौडिएको थिएँं।
मेरो फौजी हुने उमेर लगभग सकिएको थियो भने मेरो भाईको उमेर बल्ल सुरु भएको थियो। भाई मेरो पछिपछि दौडेर हिड्थ्यो। खासमा मैले नै भाईलाई आफ्नो फौजी बन्ने सपना सुम्पेको थिएँ। अन्तिमपटक भरतपुर भर्ती खुलेको थियो। सायद त्यो मेरो लागि भारतीय आर्मीको लागि अन्तिमपटक र भाईको लागि पहिलोपटक मौका थियो। हामी दुवैजना ग्राउन्डमा देखिएका थियौँ। आमाले हामी दुबैजनाबाट निकै आश गर्नुभएको थियो। विशेष गरी मबाट।
मेरो लागि त्यो अन्तिम मौका थियो आफ्नो रहर पूरा गर्ने। सपना पूरा गर्ने। त्यो मेरो लागि गर या मरको अवस्था थियो। भर्ती भएको भए मेरो जिन्दगी बन्थ्यो नभएको भए अरु उपाय थिएन पासपोर्ट बनाउने र विदेश जाने बाहेक। मलाई विश्वास थियो, मैले दौड पूरा गर्छु भन्नेमा। तर जब दौडको अन्तिम अर्थात चौथो राउन्ड (ग्राउन्ड ठूलो भएकोले चार राउन्डमै साविकको दुरी कायम हुने भएकोले) पूरा गर्न खोजें। सकिनँ। म भन्दा अगाडिको एकजना साथी लड्यो। म उसैसङ्ग अल्झिएँ। अन्तिम विन्दुमा पुग्न एक सेकेन्डले ढिलो भएँ। मैले त्यसैदिन बुझेँ, जिन्दगीमा एकसेकेन्डको महत्व कत्ति हुँदोरहेछ भन्ने कुरा। म आँखाभरि आँसु लिएर बाहिर निस्कें। भाई अघि नै निस्किसकेको थियो। भाइको सामु त आँसु लुकाईदिए तर आमाको अगाडि कसरी ? म हारेँ जिन्दगीमा पहिलोपटक। घर फर्किदाँ आमालाई कल गरेँ। आमा धेरै रुनुभयो। आमालाई कत्ति गर्दा पनि सम्झाउन नसकेपछि मेरै आँखाबाट आँसु खस्न थल्यो। यसरी एउटा रहर रहरमै विलिन भयो जुन अब कहिल्यै पूरा हुँदैन र हुनेछैन।
यो त्यही एउटा सुनौलो समय थियो जुन समयमा मैले एउटा सुनौलो जिन्दगी कोर्ने सपना देखेँ। पूरा गर्ने कोशिस गरेँ। र सफल भैइनँ। एउटा सुनौलो समय खेर फालेँ। आजभोलि लाग्छ जिन्दगीमा सबै लाइनमा पालो कुर्नेहरुले पालो पाउदैनन्। सबै दौडिने मान्छेहरुले गन्तव्य भेटाउँदैनन्।
जिन्दगी अंग्रेजी व्याकरणको येस – नो प्रश्न जस्तो रहेछ। यदि मलाई मेरो रहरको परिक्षा दिनेबेला कसैले येस भनिदिएको भए, यतिखेर मसङ्ग कलमको साटो राइफल हुन सक्थ्यो। मसीको साटो दुश्मनको खुन हुन सक्थ्यो। विचारको साटो विद्रोह हुन सक्थ्यो। म डायरीको साटो मेसिनगनको सिरानी हालेर निदाउन नसकिरहेको हुन्थेँ। या फेरि हुन सक्थ्यो, एउटा सुन्दर परिवार। एउटा खुशी अनि सुखी परिवार हुन सक्थ्यो। एउटा रंङीन जिन्दगी हुन सक्थ्यो। तर कसैले नो भनिदिएपछि म त्यसको विपरित उभिएको छु, साथमा एउटा कलम, मसी र केही विचाहरहरु लिएर।
अँ, एउटा कुरा, मेरो भाई भने नसोचेको भर्ती भयो। बेलाबेला छुट्टी आउँदा मलाई धेरथोक ल्याईदिन्छ जस्तो कम्ब्याट ड्रेस, टोपी, खुकुरी, अनि सराब आदि इत्यादि। एउटा कुरा नढाँटी भनुँ ? म आजकल भाईको यस्तै यस्तै उपहारमा आफ्नो रहरको बली चढाउने गर्छु।
कार्तिक २, २०७६0comment
by Keshu साउन ११, २०७६
मेरो मनले बुझिसकेको छ आज मौसमको मन दुखिरहेको छ । ऊ बहुत दुखी छ । सायद मभन्दा पनि बढी । अक्सर मन दुखेकाहरु न खुलेर रुन सक्दारहेछन् न खुलेर हाँस्न…